RAVELONANOSY MAMITIANA : TSY MANANA TANJONA AMIN’NY FITANTANANA NY FIRENENA INTSONY RAJOELINA. – MyDago.com aime Madagascar
RAVELONANOSY MAMITIANA : TSY MANANA TANJONA AMIN’NY FITANTANANA NY FIRENENA INTSONY RAJOELINA.
Ny olana eto amin’ny firenena hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka raha niresaka momba ny fampihavanana ny tenany dia ny fampiharana ny lalàna. Raha ny tsapa hoy izy dia ny fampiharan’ny fat ny lalàna tapaka eto no mampitranga ny olana, ka na ny tondrozotra aza dia iniana tsy hampiharina. Misy sakana hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ityamin’ireo mpitondra vitsvitsy ao satri amanao didy jadona tsy refesimandidy. Ny miaramila hoy Mamitiana izay manana andraikitra dia mitsabaka amin’ny resaka politika. Tato ato hoy izy dia noresahina ny fitondrana miaramila. Noho izany dia goragora ny fampiharana ny lalàna. Momba ny FFM dia nambarany fa na ny Tgv aza dia mifanipaka . Ny sasany milaza fa hoe avoahay ny gadra politika,sokafy ny radio nakatona, avereno ny filoha Ravalomanana Marc.Ny hafa indray dia mifikitra amin’ny sezany ary hametraka ny filohan’ny Tgv ka tsy mandeha amin’ny izy ny raharaha. Tsy manana tanjona hoy Mamitiana amin’ny fitantanana ny firenena intsony Rajoelina. Noho izany dia ny firenena no lasa nirona atsy sy aroa ka tsy manana hazo damosina ny mpitondra ka anisan’izany Rajoelina. Raha tena mpitondra hoy ity mpanao politika ity dia sahy milaza amin’ny vahoaka fa misy vatosoa, bois de rose mivoaka eto. Raha vonona hamaha krizy hoy izy dia avereno ny filoha Ravalomanana Marc amin’ity volana ity. Rehefa milamina ara-politika ny vahoaka dia izay no iriana. Ohatry ny mampalahelo hoy Mamitiana ny hoe ny Pr Zafy no hitarika ny fampihavanam-pirenena kanefa tsy tanteraka izany satria korontanin’ny any ambony na dia vonona aza ny aty ambany. Raha mijery ny fandehan’ny raharaham-pirenena isika hoy izy dia na amin’ny volana jolay aza ny fifidianana dia tsy mbola handeha io fifidianana io.
RAVELONANOSY MAMITIANA : NY OLONA TSY MAHOMBY AMIN’NY ASANY DIA MIALA
Auteur Solo Razafy*Publié le 15 février 2013 15 février 2013 Catégories Politique
6 réflexions sur « RAVELONANOSY MAMITIANA : TSY MANANA TANJONA AMIN’NY FITANTANANA NY FIRENENA INTSONY RAJOELINA. »
Tsy manana tanjona…kanefa toa misy manaraka ???
Ny vahoaka matin’ny aretina sy ny hanoanana, ny miaramila manao ny ataony rehefa tsy miara-milalao amin’ny miaramila frantsay ! Mianatra hono, dia manao sarin’ady ! Sa tena miomana ny hiady, fa hiady amin’iza ? Amin’ny vahoaka malagasy ?
Mianatra « mitandro filaminana » hono, no izany tsy maintsy mianatra mampiasa fiadiana mahery vaika ! Tsy ampy ny basy fitaovana ka mila mampiasa « fanipiana raokety » koa !
Tsy hitako mantsy izay firenena sahy hanafika an’i Madagasikara, ankaotr’i Lafrantsa, izany hoe hanampy an’i Lafrantsa ny miaramila malagasy, handavo sy hanandevo ny vahoaka malagasy !
Indrisy, very fanahy mbola velona Ramalagasy !
Mazava be mihitsy ny tanjon’ny FAT. Hanakana an-dRavalomanana tsy hody alohan’ny fifidianana, hameno ny paosy araky izay danin’ny kibo ka izay mitsivalana @ izany dia any Antsiafahy na any ambany rangolahy izay tsy any @ hoitaly. Ary ny tanoj’i Rajoelina dia mbola ny hijanonany eo ihany
Roa ihany ny vahaolana 1) ahogana i Rajoelina 2) Mody Ravalomanana. Na koa 2) 1) mety daholo. Araka ny fahitako azy dai raha vao mody eo i dada dia hisy hetsikalehibe an-jera an’i rajoelina eo ka izay no lazainy fa korotana. Lazainy foana mantsy io korotana io hisamborany olona.
Ny hetsika manaraka ho avy eo dia mila atao maharary ny FAT mihitsy ary madaka azy any @ mahaFAT azy mihitsy . Misy ireo anarana tsy maintsy tononina eto mba ho fata-bahoaka, ary haverina foana ohatra i rakrisy mpams ranazakisoa, i Haja resampona, i Moly mercia, i Hajo benanaharivelo,i losifera rakotoarimasy sns…
Dia inona koa ilay amnestia resahina hoe de 2002 a 2009 dia avy eo ahitsy @ ilay vooalzan’i SADC hoe i Ra8 sy bitro-voalvo ary ny miaramla koa. I Dada tsy niditra t@ 7 fevrier izany, ary ireo rajoelona tsy maintsy tsaraina na @ fomba inona na @ fomba inona.
15 février 2013 à 11 h 28 min
Diso lalana ireo kintana manan-drambo, dia lasa tany Rosia indray ry zalahy ! MDR !!!
15 février 2013 à 11 h 30 min
Asa na efa afaka mijery youtube ianao ry LAZALAZAO, fa dia mialatsiny !
Fa angaha moa nanana tanjona amin’ny fitantantanana ny firenena ity domelina ity ! mba tokony lanjalanjaina ihany ny kabary atao fa tsy miteniteny foana ! ny maha mpanogampanjakana azy no ilàna ny fialany eo fa tsy ny programany !
15 février 2013 à 13 h 51 min
Izay no lazaiko eto foana hoe: zalahy io efa miteni2 foana sisa.
Tokony miaiky fotsiny fa tsy tafiditra ny baolina dia vita dia mitady lalana hafa.
Fa iza avy moa ilay » ao ambony sy aty Ambany???? »aza mapmė oah!!!misy ankolafy Ravalomanan ao filihan’i CT
ary nanao sonia nanaiky an’io JIOLHY io koa maninona no milaza ianareo fa ambony , ambany ahoana indray???
tero izy fa izy no eo akaikinareo eo ary ataoko fa mahazo izany toerana ambony izany tsara.
Dia mbola hamafisina eto koa ny Tanjon’i domelina ny ny HAMOTIKA sy HANDROBA ary HANONTAFADY ny GASY
koa tsy haiko tanjona inona no lazain’Ingahy eto. Dia io izany f aambola miantona indray ny fahatongavan’i dada
dia inona no paika manaraka??????MBA MISY VE???
MBOLA HAMAFISIKO ETO KOA FA NY VAHOAKA NO HISAORANA t@’iny hetsika farany teo iny fa tsy ireo mba
atao hoe MPITARIKA VILAM-BAVA ISANY.
Précédent Article précédent : Lalao RAVALOMANANA :Tsy havelan-dRajoelina hamangy ny reniny marary mafy
Suivant Article suivant : Le CPS et l’UA Constate que, malgré les nombreux progrès réalisés, certaines dispositions de la Feuille de route restent encore à mettre en oeuvre, en particulier l’article 20, et, par conséquent décide de maintenir la suspension de la participation de Madagascar aux activités de l’UA et les sanctions imposées contre Madagascar